XOG: Barcelona Oo LIX Ciyaartoy Xaraashi Karta Suuqa Xagaaga, Qiimahii Ay Kusoo Iibsatay & Midka Ay Hadda Joogaan - Gool24.Net
XOG: Barcelona Oo LIX Ciyaartoy Xaraashi Karta Suuqa Xagaaga, Qiimahii Ay Kusoo Iibsatay & Midka Ay Hadda Joogaan
May 15, 2020 Apdihakem Omer Adem
Iyadoo uu saamayn dhaqaale oo adag guud ahaan dunida gaar ahaan ciyaaraha ku yeeshay xanuunka Korona, waxa haatanba ay saxaafadu sii lafo guraysaa qaabka uu xaaladaha suuqa kala iibsiga ee kooxaha kala duwan u saamayn karo.
Kooxda ree Spain ee Barcelona ayaa kamida tiro kooxo ah oo uu si xun u saamaynayo caabuqan dunida ku fiday waxaana ay kooxdaasi ka fikiraysaa heshiisyo ay ciyaartoy ku bedelato ciyaartoy kale iyo inay xiddigaha qaar iibiso si ay lacag uga samayso.
Sida ay sheegayso saxaafada kala duwani, lixda xiddig ee ay u badan tahay inay fasaxdo Barcelona suuqa xagaagan ayaa kala ah Nelsom Semedo, Arthur Melo, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Junior Firpo iyo Ousmane Dembele.
Barca ayuu kharash aad u badani ka galay markii ay lasoo wareegaysay lixdan ciyaaryahan waxaana ay kusoo bixisay lacag dhan 245.7 Milyan euro halka ay imika suuqa qiime ahaan ka joogaan guud ahaan 195 Milyan euro.
Dabcan lacagta uu ciyaaryahanku ka joogo suuqa kala iibsiga ayaa ka duwan mida ay kooxdiisu ku dalban karto qiime ahaan marka ay fasaxayso ee ay koox kale ka iibinayso.
Tusaale ahaan Dembele oo ay dhaawacyo dishoodeen isla markaana aan joogto ka ahayn shaxda Barcelona ayaa suuqa caadiyan ka jooga 56 Milyan oo euro balse haddiiba ay fasaxayso Blaugrana ayaa ku dalbanaysa qiime intaas ka badan.
Arthur Melo ayaa si lamid ah Dembele 56 Milyan oo euro suuqa ka jooga waxaana kusoo xiga Nelson Semedo oo 32 Milyan oo euro ah, Junior Firpo iyo Ivan Rakitic oo min 20 Milyan oo euro ah ayaa soo raaca halka Vidal uu 11 Milyan oo euro ku qiimaysan yahay.